Female infertility ကလေးမရနိုင်သေးတဲ့ အမျိုးသမီး ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဆရာမင်္ဂလာပါ။ အိမ်ထောင်မကျခင် အမျိုးသမီးတယောက်ကို ကလေး ရနိုင် မရနိုင် စစ်ဆေးလို့ ရနိုင်ပါသလားဆရာ။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတယောက်က လက်ထပ်ပြီး ၃ နှစ်လောက်နေတဲ့အထိ ကလေးမရလို့ စစ်ဆေးကြည့်တော့မှ သားဥပြွန်ပိတ်တာလို့ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ အပျိုဘဝတည်းက ရာသီသွေးပုံမှန်လာပါတယ်။ အသက်က ခုဆို ၂၉ လောက် ရှိပါပြီဆရာ။ သူငယ်ချင်းသွားပြတဲ့ ဆရာဝန်ကတော့ ဖန်ပြွန်သားန္ဓေနဲ့မှ ကလေးရနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုး ကလေးမရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး ရှိမရှိ အိမ်ထောင်မကျခင် အမျိုးသမီးတယောက်ကို စစ်လို့ ရ မရသိချင်ပါတယ်ဆရာ။
Infertility links သားသမီးမရသေးသူများအတွက်စာများ
1. Blocked Fallopian Tubes သားအိမ်ပြွန်ပိတ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/blocked-fallopian-tubes…
2. Clomiphene Citrate ကလေးမရနိုင်သူများအတွက်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/11/clomiphene-citrate.h…
3. Contraception and Fertility တားဆေး-တားနည်း ဖြတ်ပြီးသည့်နောက် http://doctortintswe.blogspot.com/…/contraception-and-ferti…
4. Egg freezing မျိုဥခဲခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/egg-freezing.html
5. Fertility and Weight ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ကလေးမရနိုင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/fertility-and-weight.ht…
6. Fertomid 50 mg မျိုးဥကျွေဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/fertomid.html
7. Hyperthyroidism and Fertility လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများရောဂါ နဲ့ သား-သမီးရနိုင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/hyperthyroidism-and-fer…
8. Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/…/infertility-treatments-…
9. Infertility (2) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-2.html
10. Infertility and Fallopian Tube Procedures သားအိမ်ပြွန်ကျဉ်းလို့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/infertility-and-fallopi…
11. Infertility and TB (1) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) htt2p://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-tb-1.html
12. Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၂) htt3p://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/infertility-and-tb-2.html
13. Infertility Q and A ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း အမေးအဖြေများ http://doctortintswe.blogspot.com/…/…/infertility-q-and.html
14. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/…/infertility-treatments-…
15. Infertility Treatments (2) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/…/infertility-and-tb-2.ht…
16. IUI and IUTPI ကိုယ်ဝန်ကို အပြင်ကနေရအောင် လုပ်ပေးနည်း (၂) မျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/iui-and-iutpi.html
17. IUI နည်းနဲ့ ကလေးရစေခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/iui.html
18. Pregnancy after tubal ligation သားကြောဖြတ်ပြီး ကလေးပြန်ရချင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/…/pregnancy-after-tubal-l…
19. Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/progesterone.html
20. Semen collection Method သုက်ရည် ထုတ်ယူနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/semen-collection-method…
21. Susten 100 ကိုယ်ဝန်မှာသုံးတဲ့ဆေးတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/susten-100.html